सेरोफेरो : कच्ची बाटो डरलाग्दो यात्रा
कच्ची बाटो डरलाग्दो यात्रा
कार्तिक १२, २०७२- दशैंको दिनमा फुपूको घर टेकिएन भने मलाई बिहे गरेर दुलही नभित्र्याएको जस्तै लाग्छ । त्यसैले घर र छरछिमेकमा टिका थापेर म साँझ ४ बजे नै फुपूको गाउँ जानका लागि हानिएँ । वर्षको एकैपटक भए पनि चाडबाडमा ८४ वर्षे फुपूदिदीसँग प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्न नपाउँदा मन निक्कै खल्लो हुने गर्छ । ‘चौतारो जस्तो टेबुलाँ बसेर भात खान्छौं, जुठेल्ना भान्छैभित्र राख्याछौं,’ ठेट पश्चिमेली लवजमा बोल्ने उहाँको संवाद गर्ने तरिका निक्कै रसिलो छ, ‘बजाराँ बस्न थालेसी माटा घर किन आम्थ्यौ ?’ उहाँको यिनै मीठा कुरा सुन्नै पनि घरिघरि त्यतातिर बाटो सोझ्याउन मन लाग्छ । पहिला गाउँसम्म सडक बिस्तार नहुँदा हामी हिँडेरै जाने गथ्र्यौं । यात्रा छोटै लाग्थ्यो । बिस्तारै कच्ची सडकको घेरो बनेपछि भने मोटरसाइकल घिसारेरै भए पनि लैजाने बानी परेको थियो । ‘अल्छि तिघ्रा मिठा जिब्रा’ नाकाबन्दीले मोटरसाइकलको तेलको टंकी भर्न नदिएपछि थोरै चलेका सार्वजनिक सवारीमा भए पनि चढ्ने सोच नपलाउने कुरै भएन ।
कास्कीको घाचोकमा पर्ने फुपूको घरसम्मको यो यात्रा पहिलाको जस्तो सहज हुनेवाला थिएन । भारतीय नाकाबन्दीको पासोमा बाँधिएको देशमा इन्धन संकट अचाक्लिसँग गहिरिँदै थियो । यसैबीचको यो दशैं धेरैका लागि दु:ख घोलिएको थोरै सुख मात्र थियो । कालो बजारबाट निचोरेर निकालिएको तेल पिएर कुदेका थोरै सवारी साधनमा झुण्डिनु र लागेभन्दा बढी भाडा बुझाउनु यात्रुको बाध्यता थियो । त्यसैले म मानसिक रुपमा तयार थिएँ, ‘कुनै गाडीभित्र यसरी कोचिनेछु कि झर्ने बेलामा जिउ पनि अंगअंग छुट्टयाएर निकाल्न परोस् ।’ गाडी बेलैमा पक्डिनका लागि म हतारहतार बाग्लुङ–पोखरा राजमार्गमा पर्ने हरिचोकमा पुगेँ । बसमा न बस्ने सिट खाली थियो न उभिने भूईँ । छतमा सकेसम्म चढ्न मन थिएन । ‘लु केटाहरू छतमा जानू है,’ खलासीले पहिल्यै सजग गराएका थिए, ‘केटी र बुढाबुढी पाटीभित्र ।’ म भने सुनेको नसुन्यै गरेर हुलैहुलमा बसभित्रै पसेँ । भीरको बाटो र छतको यात्रा मलाई पलपल मरेसरह हुन्छ । भीडमा हराएपछि बाहिर हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन्थ्यो । त्यसैले ‘देखीदेखी सातो जाने’ छतको यात्राभन्दा ‘जे पर्ला त्यही टर्ला’ भन्ने गाडीभित्र डल्लो परेर गरिने यात्रा नै मैले रोजेँ ।
गाडीभित्र निधारमा टिका, जमरा लगाएका अधिकांश यात्रुका माझमा निधार खाली भएका थोरै मानिसहरू थिए । अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर फर्केका केही यात्रुलाई घर पुगेर टिका थाप्ने हतार थियो । वर्षको एकैपटक भए पनि ससुराली टेक्न तम्तयार भएका टाढाका ज्वार्इंहरू र उनीहरूलाई माइती गाउँको बखान सुनाइरहेका चेलीहरूले बसको माहोल अझ रंगाईदिएका थिए । ‘दुई लाइन बनाएर बसौं है,’ खलासीले झ्यालबाट मुन्टो पसाएर रेडिमेड डाइलग कुर्लन थाले, ‘ब्ल्याकमा किनेको तेल हो सबै मिलेर जानुपर्छ ।’ उसको कर्कश गर्जनपछि मानिसको ठेलमठेलले मलाई पनि गाडीको पछिल्तिर पुर्‍याईदियो । माइतीबाट टिका थापेर फर्केकाहरू आफ्ना केटाकेटीलाई सहज यात्रा मिलाउन हुलमुलबीच छेकबार लगाउन थाले । काखे नानी च्यापेकाले सिटमा बसेकाहरूलाई बच्चा समाइदिन अनुरोध गर्दै थिए । ‘आउनुस् तपाईं बस्नुस्,’ नानीकी आमालाई एक भद्र पुरुषले ठाउँ छाड्दिँदा पुरुषकी अर्धाङ्गीनीले निधार खुम्च्याएको पनि देखियो । आफ्नै आमा उमेरकी बुढी आमैलाई उभ्याएर स्क्रिनटच मोबाइलको क्यान्डिक्रशमा मस्तसँग चकलेट पड्काउनेहरू पनि देखिए । गाडी छुट्न निर्धारित समयभन्दा अबेर गर्न थालेपछि भने मलाई एउटै चिन्ताले सताउँदै गयो, घाम नडुब्दै भीरको बाटो काट्नपाए हुन्थ्यो । साँझको ४:३० बजेमात्र गाडीले बल्ल साइलेन्सरबाट धूँवा फाल्न थाल्यो, ‘ढ्याँ ढ्याँ, ढ्याँ ढ्याँ ।’ गाडी याम्दी खोलाबाट उकालो लाग्दा सरदर ६० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने गाडीभाडा पनि उकालो लागेर एक सय पुगेको पत्तो पाइयो । बाटोमा पर्ने हेम्जामा थप केही मान्छेलाई छतमा उकालेपछि गाडी राजमार्गको मूलबाटो छाडेर उत्तरतर्फको कच्ची सडकतिर सोझिन थाल्यो । मर्दी सेती खोलाको मिलन बिन्दुमाथिको उकालोमै गाडी घचक्क रोकियो, कारण ढुंगा ओसार्ने ट्रक भीरको छेउ लगाएर तल झर्दै थियो । उकालो अनि भिरालो बाटोमा फिस्लिक्क भयो भने सोझै खोलामा पुगिने डर थियो । यो त्यही मर्दी खोला थियो जहाँको पानी अधिकांश पोखरेलीको धाराबाट झर्ने गर्छ । ‘ओइ यता हेर त,’ आडैकी दिदीले सानी छोरीको मुन्टो झ्यालबाट आफूतिर फर्काइन्, ‘भीरतिर हेर्‍यो भने बोमिट आउँछ ।’ उनको कुराले लाग्थ्यो छोरीलाईभन्दा आमालाई पहिला बोमिट आउँदै थियो । जेहोस्, गाडीले भीरको बाटो बेलैमा काटेपछि भने राहतको महसुस भयो । भीरकटेरानेरको धानको फाँट, भलावोट हुँदै गाडी साँझमा पाटनसम्म पुग्यो । त्यसपछि भने मान्छेको भीडैभीडबीचबाट म फुत्त बाहिर झरेर लामो सास फेर्न पाएँ, फुपूको घर आइपुग्यो । ‘ए राँ हैन कस्तो टुपुक्कै आइपुईया हो ?’ गजबार लगाउने ढोका पछिल्तिर थुचुक्क बस्नुभाको फुपू दिदीले पिँढीमा उभिएको मलाई देखेर आँखा ठुलाठुला पार्नुभो, ‘आइजा भित्र बस् ।’ जुत्ता खोलेर भित्र उहाँसँगै गुन्द्रीमा बस्न नपाउँदै उहाँले कुरो थाल्नु भो । ‘हैन काठमाडौंमा क्यारी बस्याचौं ? के पकार खाइचौं, केमा पकार खाइचौं ?’ मलाई एक्कासी प्रश्नको बाढी नै आयो । भारतीय नाकाबन्दीको खबर उहाँको कानसम्म नपुग्ने कुरै भएन । ‘ठीकै छ, चलेकै छ, ठीक होला नि चाँडै,’ मैले उत्तर छोट्याउन चाहेँ । ‘उही ठ्याँस्स पार्दा झ्यार्र पर्ने ग्याँसाँ पकाम्ने बानी पर्‍याछ तिमेरुलाई अनि काँट हुन्च ?’ गोबरग्याँस, बिजुली र दाउराको भर पर्ने फुपूदिदीको बोली फुट्न सुरु भैहाल्यो । ‘यइचिर जाँदा नी भटभटे बटारो, त्यइचिरपुग्दा नी उही भटभटै बटारो । माँटा खुट्टा राख्नु पर्दैन क्यारे,’ उहाँले यसो भन्दैगर्दा क्यार्ने तनी अल्छी भईयो झै गरी मैले मुन्टो हल्लाएँ । टीका थापें । प्रसाद थोरै खान्छु भनें । ‘भुँडी भने मुदुस जस्तो छ, खाना भने भँगेरालेझैँ चारा हाल्छ,’ बुढीमाउले मेरो पुटुस्स पेटको कुरा निकालेर फेरि हँसाउनुभो, ‘खन्नु छैन, जोत्नु छैन । उही त्यो केजाती कम्प्युटरमा ट्याकट्याक पार्‍यो अनि क्यारी घट्च त पेट ?’ एक दिन थप गाउँमै बसेँ । फर्कने दिनको हालत भने फेरि उही थियो । गाडी टाटाको, बाटो माटाको । गाडीका छतभरि मान्छे र कोसेली । गाडीभित्र तिलको गेडा अट्ने ठाउँ छैन । ‘मुन्छेका गोडाका त भर हुन्नन्, मोटरका गोडाका के भर ? फ्याट्ट चिप्लन्च अनि बर्बाद’ फुपूदिदीले तगारोमा बसेर उही पुरानै घतलाग्दो कुरो कोट्याउनु भो, ‘दुई घण्टा हिडेर पुग्ने बाटोमा तीन घण्टा मोटर कुरेर बस्नु हुन्न ।’ दिनको दुईपटक मात्र गाडी छुट्ने गाउँबाट बजार झर्न अब भने हिड्नु नै उत्तम बिकल्प देखियो । अम्बा, काक्रा, बदाम, हलुवाबेद अनि एक पाथी जेठोबुढो चामलको कोसेली बोकेर म एकजना दाईसँगै पोखरा ओर्लन थालेँ, पैदलै ।
बाटोमा फरक–फरक गाउँबाट झरेका यातायातका डरलाग्दा दृश्यहरू देखिए । घिरम्लाको झालले बाँसको थाक्रोलाई समाएझैँ यात्रुहरू कतै जीप त कतै बसलाई छपक्कै ढाकेर चढेका थिए । नाकाबन्दी कहिले खुल्ने टुंगो थिएन । हामीले कहिलेसम्म हिँडेरै बाटो काट्ने हो पनि टुंगो थिएन । फुपूदिदीको घरझैँ गोबर ग्याँस, बिजुली र दाउरामा भर परेर ढुक्क हुन कहिले पाइने हो पनि पत्तो थिएन । गाडीको चाप घटेकोबेलाँ गाडीमाथि मान्छेको चाप ह्वात्त बढेको थियो । तत्कालको लागि पीर त उही भिरकै बाटोको थियो । हिँड्दै कामना गर्दै थिएँ, ‘कतै फेरि फुपूदिदीले भनेझैँ फ्याट्ट गाडीका गोडा चिप्लेर मृत्युको समाचार पढ्न नपरोस् ।’गाडियात्राको भिडियो ।
Labels: अनुभव, यात्रा